Ndị na-emepụta ngwaahịa - China Products Factory & Suppliers
Ọpụpụ Ntanetị na-apụ apụ
Kpara Net Bird Net
Multi Nzube Ogige Netting
Plastic Trellis ntupu
Gutter Nche ntupu
Anụ na agwa & agwa
Nchedo Aka Netting
Nweta Olive na-anakọta
N'ala Net Net
Kpachara anya n’ubi gị - echela maka ụmụ ahụhụ, mgbada na nnụnụ ga-ezu ohi n’ogige gị.
Chedo okooko osisi gị, mkpụrụ osisi gị, mkpụrụ osisi na veggies ma chefuo banyere ndị na-eme ihe ọjọọ ruo mgbe ebighị ebi.
Mfe iji wụnye, bara uru ma nwee nchebe, ụgbụ na-adịgide adịgide nke na-adịgide ruo ọtụtụ afọ.
Ihe nkwado nnụnụ na-enyere ìhè na mmiri aka iru mkpụrụ osisi na ihe ọkụkụ.
100% Ọhụrụ dị elu ma dị elu.
Knitted mgbochi nnụnụ ụgbụ sitere na HDPE monofilament ma nye nchedo ogologo oge maka ụdị ihe ọkụkụ niile na osisi megide nnụnụ niile na anụ ọhịa. Otutu obosara di na 20m maka ebe buru ibu. Ogologo ndụ nke ụgbụ ahụ bụ afọ 4-6, dabere na ọnọdụ ojiji. Enwere ike iji ngwaahịa a yana ngịga mkpụrụ osisi, iji kpuchie elu ụlọ yana enwere ike iji kpuchie ọdọ mmiri iji chebe azụ site na mwakpo heron ebe ọ na-ewepụ akwụkwọ.
Ezubere ihe nchekwa ihe ubi iji kpuchido ogige gị na nhazi ala site na nnụnnụ, anụmanụ na ndị ọzọ na-eme ihe ọjọọ. Dị na ọtụtụ nha.
Plastic Garden Trellis Mesh bụ ihe amịpụtara HDPE UV na-eme ka oghere nke Trellis dị mma maka ịkwado osisi ịrị elu, ma ọ bụ nchekwa ogige.
Ọ bụ a fechaa ọzọ ka osisi ma ọ bụ waya trellis na UV-echebe otú ọ ga-adịgide.
Gutter nche ntupu, plastic gutter nche ntupu gita ekpuchi mesh gutter nche mpịakọta na nko maka mmiri ozuzo epupụta, Jiri maka Ngwaọrụ & Home Mmelite - A na-ejikarị ya na ngwaahịa mmiri, anụ ọkụkọ ozuzu, ọrụ okike, iwu obodo, mmezi ngwaahịa mmiri, golf golf N'ezie nchebe.
Egwuregwu pea na bean bụ ihe na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nke na-eme ka polyethylene mesh netting, nkwado maka agwa ndị na-agba ọsọ, peas, peas ụtọ na osisi ndị ọzọ na-arị elu - ya na ndị na-agba ọsọ na-erite uru site na ntaneti mgbe a na-agbanye ya.
Butterfly netting ntupu mere site na HDPE siri ike na UV kwụsiri ike, ọ na-adị ka akwa dị nro imetụ aka ga-adịgide ruo ọtụtụ afọ. Ìhè iji dina ozugbo n'ihe ọkụkụ ma sie ike iji kpuchie okpokolo agba, cages ma ọ bụ hoops.
Arụ ọrụ dị ka a nkịtị mgbochi n'etiti kụrụ & urukurubụba-egbochi ha fromtọ àkwá ha na n'aka, caterpillars na-eri ihe ubi.
Emere akwa a kpara nke ọma ka anyị wee kwe ka ikuku ikuku na-ajụ gị oyi ma na-abịa n'ọtụtụ ihe mkpuchi, yabụ ị nwere ike ịchọta nke ga-egbo mkpa gị.
A na-ejikarị Ejiji Ejiri Ejiji mee ihe na ngwa metụtara nchebe ihe ọkụkụ na ọrụ ugbo.
Ogwe aka nchekwa nchebe dị mma maka nchedo ngwaahịa na nkewa nke ngwaahịa na usoro niile, njikwa, mbupu na ngwa nchekwa. Dị diamond ahụ na-emeghe ntupu na-ekpochapụ mmiri mmiri, si otú a na-echebe megide nchara na corrosion. Nchekwa agaghị emebi, gbochie mmebi nke ihu elu. A pụkwara iji maka nkwakọ ngwaahịa nke mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, dị nkenke ma mara mma ma dịkwa mfe ibu.
Ihuenyo Nzuzo nzuzo nke ejiri ihe eji eme HDPE, a na-emecha akụkụ anọ site na ngwongwo mesikwuru ma mechaa ya na grommets n'akụkụ anọ niile, wee tinye ya ma ziga ya maka nrụnye. A na-eme ka akwa ahụ sie ike nke ọma ka o wee nwee ike iguzogide ịla n'iyi ma jigide ike ihe maka afọ eji. Enwere ike idozi ya na zip zip maka ntinye. A na-ejikarị yad, ogige ntụrụndụ, ebe ọdọ mmiri na-ejigide, ụlọ ikpe, ihe omume, mbara ihu na ubi.
Emebere Anti-Hail Net maka ikpuchi osisi apụl, ubi mkpụrụ osisi, ubi vaịn na griin haus. A akwa njupụta polyethylene, super kwụsiri ike megide UV ụzarị, iji gbochie akụ mmiri mmiri mebiri na a osisi iche iche nke kụrụ. Na-enye aka ichebe osisi na mkpụrụ osisi n'aka nnụnụ ma ka na-ekwe ka ọtụtụ anwụ gafee.
Etsgbụ mgbochi akụ mmiri igwe dị arọ, na-agbanwe agbanwe, dịkwa mfe ịwụnye na iwepụ.
HDPE Olive Net maka Owuwe Ihe Ubi Olive bụ nke eji ihe ọkụ ọkụ na-agbanwe agbanwe ma na-adịgide adịgide UV guzobere polyethylene.
Gbụ ahụ nwere ọtụtụ ụdị ntan iji bulie ụzọ owuwe ihe ubi dị iche iche nke oliv na mkpụrụ osisi.
Enwekwara ike iji ya iji kpokọta ọtụtụ mkpụrụ osisi dị ka walnuts, oliv, hazelnuts na chestnuts ect.
ỌZ KWES FREER FREE N'FREELỌ +86 519 86059966
Adreesị Alọ A2309, World Trade Center, Nke 16 Yanzheng Road, Wujin District, Changzhou, Jiangsu Province, China 213164